Ungazifunda njani ezinye iincwadi ngonyaka | Uncwadi lwangoku
Ungazifunda njani ezinye iincwadi ngonyaka
Funda. Lo mkhwa abantu abaninzi bawulibeleyo. Nangona kunjalo, kukho abambalwa abasenencwadi ezandleni zabo, nokuba kusephepheni okanye kwidijithali, kwaye basebenzise elona xesha lincinci basimahla ukuba baqhubele phambili ekuyifundeni.
Nangona kunjalo, ipesenti enkulu yabemi, nokuba yiSpanish okanye umhlaba, ayizukufumana incwadi ifundwe ngonyaka. Abanye baya kugqitha kuyo. Ukuba ufuna ukuba kweli qela lesibini, kuya kufuneka uziqhelise ukufunda. Kodwa kananjalo uyathanda ukuyenza. Ke, Siza kukunika iingcebiso ukuze wazi amabali, kungekuphela kwincwadi enye, kodwa uninzi, minyaka le.
1 Owona mceli mngeni kwinkcubeko: ukufunda iincwadi ezininzi
1.1 Yiba nekona yakho yokufunda
1.2 Khetha iincwadi ngokukhokelwa yile nto uyithandayo
1.3 Chitha ixesha elincinci ufunda yonke imihla
1.4 Ukuba awuyithandi incwadi, yibeke phantsi
1.5 5. Khangela iincwadi ezitsala umdla wakho, musa ukukhokelwa ziifashoni
Owona mceli mngeni kwinkcubeko: ukufunda iincwadi ezininzi
Isenokubonakala ngathi iyabhanxa. Kodwa iincwadi zokufunda zinezibonelelo ezininzi. Ukuba ufunda enye sele iyimpumelelo; Nangona kunjalo, into endiphakamisa ukuba, ubuncinci inyanga, ibali eliqala kwaye liphele liwela ezandleni zakho.
Ukugcina ixesha elincinci akukho nzima, kwaye uya kuvuna izibonelelo ezinkulu.
Ngoku, ungayiphumeza njani?
Yiba nekona yakho yokufunda
Kubaluleke kakhulu ukuba ube nendawo yokuphumla uze uzikise kufundo lwakho. Ukufunda ngelixa ulinde abantwana bakho ukuba benze umsebenzi wesikolo wasekhaya, okanye ukubukela umabonwakude, ayisiyiyo eyona nto intle, kuba ingxinano ayizukufana.
Isitulo seengalo, isibane. Konke oku kwifayile ye- ikona ezolileyo yekhaya lakho kuyakwanela ukuqalisa ibali elilindele ukubaliswa engqondweni yakho.
Khetha iincwadi ngokukhokelwa yile nto uyithandayo
Zininzi iintlobo zoncwadi ezahlukeneyo kwaye ngokuqinisekileyo uya kuthanda enye kwenye. Ukuba awazi, ndicebisa ukuba inyanga nganye khetha incwadi ngomxholo eyahlukileyo: ezothando, ezonwabisayo, ezoyikisayo, isayensi, intsomi ...
Ngale ndlela, uya kuyiphucula into oyithandayo, kuba khange uyithande, kungenxa yokuba olo hlobo alunakuba lolwakho. Ngayo yonke loo nto, ndicebisa ukuba uzame amatyeli ambalwa. Mhlawumbi ayilulo uhlobo uqobo ongaluthandiyo, kodwa libali lale ncwadi.
Chitha ixesha elincinci ufunda yonke imihla
Njengoko benditshilo ngaphambili, sinokuhlala sithatha imizuzu embalwa yokufunda. Ke ngoko, cinga ngemini yakho, ngayo yonke into ekufuneka uyenzile, kwaye khetha umzuzwana apho uya kuba nakho ukufumana incwadi ngaphandle kokuphazanyiswa nangubani na. Nokuba sisiqingatha seyure.
Ndikholelwe ukuba, ukuba ibali liyakubamba, ekugqibeleni uyakufuna ukuchitha ixesha elininzi kwaye, ingaphelelanga apho, kodwa uyakuthatha incwadi elandelayo ngomdlandla ngakumbi kuba uyakulindela ukuziva ngendlela efanayo neyangaphambili.
Ukuba awuyithandi incwadi, yibeke phantsi
Kwabaninzi, oku kukungcwalisa. Kodwa xa ungenawo umkhwa wokufunda, ukuba unayo incwadi ongayithandiyo, okanye xa ilixesha lokufunda wenza nantoni na ngaphandle koko, ayiloxesha lelo bali.
Kule meko, soloko unendawo enye okanye ezimbini ezinokubambela apho unokulandela khona inkqubo yakho yokubhala mihla le. Yiyo loo nto kuya kuhlala kukho ugcino oluya kulinda ithuba layo ukuba ukhetho lokuqala belungalunganga.
5. Khangela iincwadi ezitsala umdla wakho, musa ukukhokelwa ziifashoni
Ukuhamba ngeencwadi ezithengisa kakhulu yeyona nto imbi onokuyenza. Andinanto ngokuchasene nayo, kodwa ubutyebi bokwenene boncwadi abukho phakathi kolo luhlu. Ngamanye amaxesha kungcono ukwenza uphando oluncinci kwaye uthabatheke ngumbono, nokuba ngowogquma okanye isishwankathelo, ukuyithenga nokuyifunda.
Kuya kubakho ixesha lokufunda iincwadi ezibonakala kakhulu kumaphephandaba, kwiimagazini, kumabonwakude okanye kwi-intanethi.
Kwaye kukuba ukufunda iincwadi ezininzi ngonyaka akukho nzima, kuya kufuneka ukuthathe njengomceli mngeni. Kodwa enye yezo oya kudibana nazo ngenene. Gcina ukhumbula ukuba unokukhetha kumaphepha angama-300 kwaye, wahlulwe waba yimihla yenyanga, ufumana amaphepha ali-10 ngosuku. Ulinde ntoni ukuqala ngolokuqala?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Ungazifunda njani ezinye iincwadi ngonyaka
Izindlu zokubhukisha ixesha lokuhlala-ekhaya